Mpanamboatra sy mpamatsy milina fanamafisam-bato - Orinasa milina famolavolana vato any Shina
Masinina fanosorana mandeha ho azy ho an'ny Granite
Ity masinina ity miaraka amin'ny haavo iraisam-pirenena momba ny fitotoana vato sy ny fikosoham-bolo, ny JOBORN dia nanana ny R&D ary nanamboatra azy io tamin'ny alàlan'ny tombotsoan'ny vokatra mitovy aminy ao an-trano sy any ivelany. Ny indostrialy famolavolana ny masinina hitarika ny fironana indostrialy, Fitotoana Volo sy Poloney ef ...
Masinina fanosorana mandeha ho azy ho an'ny marbra
Ity masinina ity miaraka amin'ny haavo iraisam-pirenena mandroso amin'ny fikolokoloana vato sy ny fitaovana fandefasana azy, JOBORN dia nanana ny R&D ary nanamboatra azy io tamin'ny alàlan'ny tombotsoan'ny vokatra mitovy amin'izany ao an-trano sy any ivelany. Ny indostrian'ny famolavolana ny masinina hitarika ny fironana indostrialy, ny fikolokoloana ary ny famolavolana ...
Masinina Fitotoana Litchi-Surface mandeha ho azy
Ity masinina ity miaraka amin'ny haavo iraisam-pirenena momba ny famolavolana vato vita amin'ny vato litchi, JOBORN dia manana R&D ary manamboatra azy io amin'ny alàlan'ny tombony azo amin'ny vokatra mitovy amin'izany na an-trano sy any ivelany. Ny indostrialy famolavolana ny masinina hitarika ny fironana indostrialy, Fitotoana fahombiazana sy nitoto ...
Masinina manafatra tanana
Mampiasa tsanganana boribory ity masinina ity ho toy ny velaran'ny torolàlana ho an'ny fisondrotana mandeha ho azy miakatra sy midina. Ny masinina dia azo ampiharina amin'ny fikolokoloana fiaramanidina sy ny famolahana ny takelaka misy hateviny, vatosoa ary vato maro karazana miaraka amin'ny famolavolana. Ny latabatra fiasana dia azo fidina amin'ny fikolokoloana trano fanaovana asa tanana ao ...
Milina fitotoana vato Edge
Ny kodiarana fikosohan'ity milina ity dia mandray kapila fitotoana rano ary ampiarahina amin'ny feon-tsokosoko. Araka ny habe sy ny hatevin'ny vato dia mety ho torotoro ny sisin'ny zoro ankavanan'ny vato fisaka isan-karazany. Ny sisiny mahitsy matevina dia mamirapiratra, ny sisiny havanana eo ambany ...